Banyere Anyị - Shandong Landian Biological Technology Co., Ltd.
Shandong LanDian Biological Technology Co., LTD. dị na ogige ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ dị na shouguang, mpaghara shandong, nke dị na ndịda ụsọ mmiri nke bohai laizhou Bay na ọ bụ "obodo nke ịkụ azụ, nnu na akwụkwọ nri". Companylọ ọrụ ahụ bụ naanị ụlọ ọrụ dị elu nke na-azụpụta teknụzụ patent nke ụlọ akwụkwọ sayensị nke China iji mepụta acid succinic dị na bio site na gbaa ụka na iji mepụta PBS biodegradable plastic na-eji succinic acid dị ka akụrụngwa.
Companylọ ọrụ ahụ na-ekpuchi mpaghara nke 1500 mu na ngụkọta atụmatụ nke ọrụ ahụ bụ 500,000 tọn / afọ nke mmiri succinic acid na 200,000 tọn / afọ nke PBS na-emepụta biodegradable plastic, yana ngụkọta ego nke ijeri yuan 5 na ihe owuwu. na ụzọ atọ. Akụkụ nke mbụ nyekwara 1 ijeri yuan na usoro ihe owuwu bụ 120,000 tọn / afọ nke mmiri succinic na-adabere na bio na 50,000 tọn / afọ nke ngwaahịa PBS. Emechara usoro mmepụta nke mbụ 60,000 tọn / afọ nke agba nke mbụ wee tinye ya na Septemba 2017. Mmiri succinic acid nwere ezigbo mma ma bụrụ nke ndị ọrụ maara nke ọma.
Companylọ ọrụ ahụ siri ike na nyocha na teknụzụ mmepe yana edepụtara ngwaahịa ya na mmemme "863" mba. Ọ bụ academician-arụ ọrụ na postdoctoral workstation nke Chinese agụmakwụkwọ nke sayensị, na-eduga enterprise nke Weifang bio dabeere ọhụrụ ihe onwunwe isi na mba ozo. N'ịkwadoro mahadum Tsinghua, Tianjin biotechnology research institute of Chinese academy of sciences, ụlọ ọrụ ahụ eguzobewo ụlọ nyocha microbiology, laabu biology biology, PBS plastics degradable na ngwaahịa ha gbanwetụrụ na nyocha na ụlọ nyocha mmepe. Ọ na - ewukwasị acid succinic acid gbara ọkpụrụkpụ na China na ngụkọta ụlọ ọrụ PBS dabere na bio site na iji teknụzụ gbaa ụka nke kachasị elu n'ụwa.
01 Uru ngwaahịa
Mmiri succinic acid na sodium succinate sitere na bio, ngwaahịa niile emere site na usoro gbaa ụka, ga-abụ onye asọmpi siri ike iji dochie usoro mmepụta petrochemical n'ọdịnihu; ihe eji eme ihe na 1,4 butanediol dị iche na ngwaahịa ndị e mepụtara site na usoro kemịkal. Ngwaahịa ndị nwere ihe ndị dị ndụ, iji butanediol sitere na bio nwere ike ịmepụta PBAT na ngwaahịa ndị ọzọ, nke nwere ike ịkwalite nkwalite PBAT dabeere na bio na ahịa Europe na America. Usoro ngwaahịa PBS nke sitere na bio nwere uru doro anya na akụrụngwa na nrụrụ arụ, na ngwaahịa na-emepụta ihe bụ acid succinic acid nke ụlọ ọrụ anyị, ya mere ọdịnaya bio-carbon zuru oke na ụkpụrụ nke Europe na United States.
02 Uru ahịa
Mmepụta nke succinic acid site na usoro gbaa ụka na-emetụta mmiri anaghị emetụta ọnụahịa mmanụ ala, ọnụahịa nke ihe ndị ahụ kwụsiri ike ruo ogologo oge, ọnụahịa mmepụta dị ala karịa nke usoro kemịkal. Ka ọ dị ugbu a, ihe ndị na-emebi emebi PBS, PBST na PBSA na-emetụta ọnụahịa dị elu nke succinic acid na mbido mbụ, na-eduga na mmefu mmepụta dị elu ma na-egbochi nkwalite na ntinye nke usoro PBS. Dika a na - etinye acid acid na ndu 1,4-butanediol nke ulo oru anyi di na ahia buru ibu, o ghaghi ikwalite ngwa nke ihe eji ebi ndu ajuju PBS na PBAT n'ulo ahia na nke mba ozo.
03 Nka na ụzụ Uru
Teknụzụ gbaa ụka nke ụlọ ọrụ anyị edozila ihe dị iche iche nke acid dị iche iche na ngwaahịa site na usoro ịgba ụka site na nyocha na mmepe na mmelite nke usoro mmepụta na afọ ndị na-adịbeghị anya. Emepụta ọnụ ahịa ngwaahịa na-aga n'ihu na-ebelata ma na-emeziwanye ngwaahịa ka mma.
04 Njikwa njikwa
Companylọ ọrụ ahụ nwere ndị ọrụ njikwa zuru oke, nke ọma, ngwa ngwa na nke ọhụụ. The ụlọ ọrụ nwere onye zuru uru na ụlọ ọrụ na okwu nke ngwaike akụrụngwa ike. Na elu-edu pesonel, na azụmahịa na nkà ihe ọmụma nke na-enwe ọganihu na oge, anyị ụlọ ọrụ ga-enwe ọtụtụ uru na ndị ụlọ ọrụ. Omume.
Blue Industry, Na-eduzi ụwa
Teknụzụ na-agbanwe gburugburu
Ebumnuche nke ahịa, nke achọpụtara ọhụrụ
Meziwanye ala nna gị, baara ụmụ mmadụ uru
Nkà ihe omuma
Teknụzụ nke mbụ, imepụta ihe
Layer site na oyi akwa, àgwà mbụ
Mee nrọ gị, bulie ọrụ gị
Sie ike ma kpebisie ike
Green & ọhụrụ
Companylọ ọrụ ahụ nakweere teknụzụ ọhụụ nke gbaa ụka na-egbu egbu nke bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, enweghị mmetọ na-adịghị egbu egbu site na akụrụngwa, usoro mmepụta ihe iji rụchaa ngwaahịa. Site na ike nke nchedo gburugburu ebe obibi nke mba, ọ dị oke mkpa ịkọwapụta plastik na-emebi emebi na-alụ ọgụ megide mmetọ ọcha. Mmiri succinic sitere na bio nke ụlọ ọrụ ahụ mepụtara bụ naanị akụrụngwa maka imepụta PBS plastic na-ere ere. Ọ bụ ihe a na-apụghị ịgbanwe agbanwe na atụmanya nke mbadamba.